Ụbọchị My Pet » Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na Mmekọrịta Ndụmọdụ – Iwu nke Ndọrọ
Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na Mmekọrịta Ndụmọdụ – Iwu nke Ndọrọ
Ya mere, ihe bụ Iwu nke Ndọrọ? Nanị ya bụ a Universal Iwu na-ekwu na anyị ga-adọta n'ime ndụ anyị na ihe ndị anyị na-elekwasị anya na, ma ọ bụ mma ma ọ bụ na-adịghị mma. Ma ị maara nke ya ma ọ bụ, ọ bụla chere na ị nwere, ọ bụla mmetụta ị na-eche, ihe niile ị na-anụ ma na-agụ, na-emetụta gị eziokwu.
Ya mere, ihe ka nke ahụ na-eme na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mmekọrịta?
Site n'ezie ịghọta ihe ị chọrọ site na a mmekọrịta na itinye ụfọdụ nnọọ isi Iwu nke Ndọrọ ụkpụrụ, ị ga-hụ na ị ga-esi ihe ọchịchọ gị n'ezie. Ọ dị mkpa ịghọta kpọmkwem ihe ahụ àgwà, agwa, ụkpụrụ, kweere, na ọdịmma dị gị mkpa ka ị pụrụ ilekwasị anya n'ihe ị chọrọ ná mmekọrịta unu kama nke ihe ị na-achọghị.
Cheta, ị ga-enweta ihe ị-elekwasị anya na.
Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ ga-aga site na otu okpu mmekọrịta ọzọ enweghị enye ọ bụla echiche bụla mere ma ọ bụ otú ha mmekọrịta na-gwụsịrị. Ọbụna ka mma, ha karịrị ziri ezi na ejedebe na ọzọ mmekọrịta na ada ada yiri, ma na-abụghị oké ihe.
“Ọ bụrụ na ị dị ka m bụ, unu enweghị echiche ihe ị chọrọ n'ezie
gị ọzọ mmekọrịta n na ya kwesịrị kpamkpam dị iche iche si
onye ikpeazụ ahụ na-enweghị otú n'ala!”
M na-maara ihe m na-achọghị N dịkarịa ala site mmekọrịta na dị nnọọ biri. Ọ gaghị ndidi ukwuu ma ọ bụrụ na m ga-ewerewo oge na-eche banyere ihe niile nke na-emezughị mmekọrịta na jikọtara niile na-akpata obi mgbawa n'ime otu doro anya echiche nke ihe m mere na-achọghị na a mmekọrịta? M gaara azọpụta onwe m ole na ole swings nke pendulum.
Olee otú m 'na-adọta’ zuru okè mmekọrịta m?
M na-aga na-egosi gị a n'ezie ngwa ngwa na ụzọ dị mfe iji na-adọta ndị kpọmkwem onye na ị na-achọ – Gị nrọ ụbọchị!
Wepụ a mpempe akwụkwọ ma dee ihe niile ị chọrọ gị zuru okè mmekọrịta. Gịnị bụ ọ na-amasị? Olee otú ha na-ele anya, isi, okwu? Gịnị dị iche iche nke ihe ị ga-eme ọnụ? Olee otú obi dị gị mgbe ị na-gburugburu ha? N'Ezie-esi n'ime nke a na-ewe oge dee bụla zuru ezu. Ọ ga-abara ya na ọgwụgwụ.
Ọtụtụ ndị mmadụ na mgbe a na nzọụkwụ nke na-ede ala ihe ha chọrọ ma ọ bụ nke otu onye kasị mkpa ịchọta onye nke nrọ ha.
“Ị maara na nanị site ede ihe ị chọrọ, ị dịkwuo gị inweta ya site 80%!”
Chegodị echiche banyere na a nkeji…
Ghara inwe obi abụọ onwe gị. Iche na ị zuru okè n'ụzọ ọ bụla na ọ dịghị ihe na-eguzo na ụzọ gị nke na-kpọmkwem ihe ị chọrọ. Ọ bụghị ego, ma ọ bụ anya, ma ọ bụ oge, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ.
“ImagineÖ Ị nwere ike nwere ihe ọ bụla ị na-achọ!”
Mgbe ị na-okokụre ihe omume a, ị ga-ọma n'ihu nke egwuregwu. Were dị ka ogologo oge dị ka ị chọrọ… Nke a bụ isi ihe na-gị kacha ihe ịga nke ọma!
Nwee doro nnọọ anya n'uche gị banyere ihe ị chọrọ. Ma ọ bụghị ya, Eluigwe na Ala ga-enweghị echiche ihe ị chọrọ n'ezie n na nke ahụ bụ ihe ọ ga-enye gị. (Dị nnọọ a ngwa ngwa dee, mgbe m na-ekwu 'Eluigwe na Ala', M pụtara Chineke, Buddha, Mama Earth, ma ọ bụ ihe ọ bụla ị na-eji okwu gị eluigwe na ala elu ike.)
Mgbagwoju anya? Nọrọ na m hereÖ Kere aga ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ịtụ a bred e tinyere anụ. The odibo odomo na gị iji. Tupu gị bred e tinyere anụ abịarute, ị na-agbanwe gị iji. Ugbu a, ị na-agwa ndị odibo na ị chọrọ n'ezie a ibe anụ. The odibo odomo na gị iji. Tupu gị ibe anụ abịarute, ị na-agwa ndị odibo na ị gbanwere uche gị ọzọ na-amasị na a salad. Ugbu a, na a, kasị waiters ga-agwa gị ka ị salad onwe gị. Eluigwe na Ala ga-eme nke a, ma ị nwere ike ịhụ otú ọ bụ nnọọ ike maka Eluigwe na Ala na-enye gị ihe ị chọrọ mgbe ị na-amaghị?
OK N okokụre?
Ọ bụrụ na ị gaghị eme ya n laghachi na-eme ya. M kwuru na a ga-mfe, ma ị ka ga-eme a obere nke na-arụ ọrụ.
Ugbu a, na ị na-doro nnọọ anya banyere ihe ị na-achọ n'ezie na onye, na-na mpempe akwụkwọ, n'ogige atụrụ ya na-ebu ya na ị na-ọ dịkarịa ala a izu. Na-ebu ya na gị n'akpa uwe, na gị obere akpa ma ọ bụ obere akpa, ma ọ bụ na gị uwe ime. Ọ dịghị mkpa na ebe ị na-etinye ya, dị ka ogologo oge ị na-enye gị na ọ dịkarịa ala a izu. Oge ọ bụla ị na-echeta na i nwere nke a mpempe akwụkwọ na ị, echeta mmetụta nke ihe ọ ga-amasị na-na onye gị na. N'Ezie-eche na ọ!
N'ebe ahụ bụ otu ihe ọzọ dị nnọọ mkpa. N'oge a izu, jide n'aka na ị na-ege ntị gị gootu, ma ọ bụ olu dị n'ime. Ọ bụrụ na ọ na-agwa gị ka ị na-akwụsị akọrọ cleaners na Tuesday mgbe ị na-ejikarị na-Thursday, na-aga na Tuesday! Ị nwere ike izute gị mkpụrụ obi ma ọ bụ nwunye mgbe gị guzo akara. N'ókè ebe a bụ na ị na-etinye gị iji na Eluigwe na Ala, ugbu a ị chọrọ ige ntị na ihe ịrịba ama nke a na-zitere ụzọ gị ma na-eme ha!
5 Akpa Taboos I Kwesịrị Ịhapụ na Gbaa Ọsọ Site